Kwụpụ 1: Mbipụta nke Mbụ Bụ Nkwado. Enwere ọtụtụ mbubata ọnụ ala, ọkachasị na China, na ahịa. Mana lasers bụ igwe dị mgbagwoju anya ma ha mebie ma chọọ ka emezie ya. Gbaa mbọ hụ na ụlọ ọrụ ị zụtara n'aka ya bụ ntụkwasị obi ma nye gị ezigbo nkwado maka gị na igwe ha mgbe ị zụrụ ya ....
Nhọrọ nke laser osise igwe
Afọ gara aga, laser osise igwe nwere ike na-ebu obere format osise ruru oru-agaghị emeli. Na-aga n'ihu na-emelite na mmepe nke nkà na ụzụ, akara motherboard mepụtara ugbu a nwere ike na-akwado nnukwu format osise. N'ihi ya, ala nhazi laser osise / ...
Iji igwe ihe osise nke laser
Laser osise ọnwụ igwe emepụta. Igwe ihe mkpocha laser bụ ngwa ngwaahịa dị elu, nke bụ ngwa anya, igwe, ngwaahịa njikọta eletriki. Na ihe ịga nke ọma mmepe nke laser osise technology, na ụlọ ọrụ malitere ịzụlite ngwa ngwa. Ruo ugbu a, ngwa ahụ ...